Ama-Steel Cut Oats vs. Ama-Oats Ajiwe: Uyini Umehluko? - Ukudla
Ama-Steel Cut Oats vs. Ama-Oats Agoqiwe: Uyini Umehluko Phakathi Kokudla Kwasekuseni?
Kubhangqwe nenkomishi eshisayo yekhofi ne-crossword puzzle, i-oatmeal yindlela yakudala yokudlela kwasekuseni — i-ahem, ine-Ina Garten isitembu sokwamukelwa —Ngesizathu esihle. Kunomsoco, ukugcwalisa, kulula ukwenza (ngobusuku obubodwa, ngisho) futhi ukwenza izinto ezihlukahlukene ukuze uqalise . Kepha uma kukhulunywa ngokukhetha i-oats ofuna ukuyidla, ubhekene nezinketho ezimbalwa. Lapha, siphula umehluko okwe-oats yensimbi okusikiwe kuqhathaniswa nama-oats agoqiwe, ukuze ukwazi ukuzulazula kalula ngephaseji ye-cereal.
Yini ama-oats, vele?
Awukwazi ukukhuluma ngakho izinhlobo yama-oats ngaphandle kokuqonda ukuthi yini ama-oats kwasekuqaleni. Wonke ama-oats, noma ngabe insimbi igundiwe noma igoqiwe, luhlobo lwezinhlamvu ezigcwele zokusanhlamvu. Izinhlamvu ze-oat ngazinye ziyimbewu edliwayo yotshani be-oat, eyakhiwe yigciwane (umbungu noma ingxenye engaphakathi impela), i-endosperm (isitashi, ingxenye ecebile ngamaprotheni akha ingxenye enkulu ye-oat) kanye ne-bran (kanzima, umgwengwezi wangaphandle). Ngaphambi kokuba kwenziwe noma yikuphi ukucubungula, izinhlamvu ze-oat ziyagoqeleka amakhoba angadleki ayasuswa, abese eba yiziqu.
OKUSHIWO: Imibono ye-On-the-Go yasekuseni yama-Crazy Morning
anakopa / Getty Izithombe
Yini ama-oats steel cut?
Ama-oats wokusika wensimbi (kwesinye isikhathi abizwa ngama-oats ase-Ireland noma ama-pinhead oats) yifomu elicutshungulwa kakhulu lama-oats. Zenziwe ngokuthatha ama-oat groats bese uzisika zibe izingcezu ezimbili noma ezintathu ezincane usebenzisa insimbi yensimbi. Ziqhekekile, ziyahlafuna futhi zingathothwa ngaphambi kokupheka ukunambitheka okwengeziwe kwamantongomane.
UVlad Nikonenko / FOAP / Getty Izithombe
Yini ama-oats agingqiwe?
Ama-oats ahlanganisiwe, ama-oats amadala, acutshungulwa kancane kune-oats yensimbi esikiwe. Ngemuva kokugquma, ama-oat groats aqale ashunqiswe ukuthambisa i-bran, bese egoqelwa ezingcezwini ezicwebezelayo ezinjenge-flake ngaphansi kwama-roller asindayo futhi omiswe kuze kube yilapho isitebhisi sethala. Ziyi-chewier kune-oats ezisheshayo (uhlobo oluthengiswa ephaketheni elinamaqanda e-dinosaur, isibonelo), kodwa bushelelezi futhi bungukhrimu kunama-oats anqunywe ngensimbi.
Uyini umehluko phakathi kwe-steel cut oats vs. oats ogoqiwe?
Ngenkathi ziqala njengento efanayo, i-oats yensimbi esikiwe nama-oats asongwe yizithako ezimbili ezihluke kakhulu.
ukushada noma ukungashadi
I-TBH, insimbi esikiwe ne-oats egoqiwe icishe ifane ngokudla. Kodwa ngenxa yokuthi azicutshungulwa kancane futhi zigqokisa lelo bran elingaphandle, ama-oats okusika ensimbi aqukethe ukuncibilika okuningi ifayibha kunama-oats asongwe.
Ukuvuselela okusheshayo: I-Glycemic Index isezingeni elilinganiselwe lama-carbohydrate ekudleni okususelwa ekutheni athinta kanjani amazinga kashukela egazini. Ngo- 52 , ama-oats wensimbi asikiwe abhekwa njengophansi kuya kokuphakathi enkombeni ye-glycemic, kuyilapho ama-oats agoqiwe enenkomba ye-glycemic ephakeme 59 . Umehluko yi-miniscule, kepha ama-oats amajazi ensimbi mancane amathuba okuthi aphike ushukela wegazi lakho (okubaluleke kakhulu kubantu abanesifo sikashukela).
i-powder yokubhaka ebusweni ngenxa yezinduna
Impela, i-oats yensimbi esikiwe negoqiwe inambitha cishe efanayo, kepha ukwakheka kwayo kuhluke kakhulu. Lapho yenziwa iphalishi, ama-oats agoqiwe anokuthungwa okujiyile, oku-creamy oatmeal okungenzeka ujwayelene nakho. Ama-oats okusika okwenziwe ngensimbi athanda kakhulu ukuhlafuna, ngokuthungwa kwamazinyo nokungaguquguquki okuncane kokhilimu.
Uma yenziwa iphalishi esitofini, ama-oats agoqiwe kuzothatha cishe imizuzu emihlanu ukupheka. Njengoba ilungiswe ngendlela efanayo, i-oats yensimbi esikiwe ithatha isikhathi eside kakhulu — cishe imizuzu engama-30.
Ngeke sithi izinsimbi ezisikiwe nezisikiwe ziyashintshaniswa, kodwa zingasetshenziswa kuzindlela zokupheka ezifanayo. Kokubili kuhle kakhulu njenge-oats yasebusuku futhi kubhakwe kumakhukhi noma kwimigoqo, kepha ama-oats ahlanganisiwe aphakeme kuma-granolas, ama-muffin, amakhukhi nanjengama-toppings awayo. (Izinsimbi ezisikiwe zensimbi zingahle zibe nobumnandi kunoma yikuphi.)
ama-movie angama-10 aphezulu othando english
Yikuphi i-oats okuyiyona enempilo kakhulu?
Nayi imininingwane yokudla okunempilo nge-gramu eyodwa engama-40 yokuphakelwa kwama-oats ensimbi, nge USDA :
4g fibre (2g encibilikayo)
Qhathanisa lokho nemininingwane yokudla okunomsoco nge-gramu eyodwa engama-40 yama-oats ahlanganisiwe, ngakunye USDA :
uwoyela we-castor nomxube wamafutha we-alimondi wokukhula kwezinwele
4g fibre (0.8g encibilikayo)
TL; DR? Azikho izinsimbi ezisikiwe noma izinsimbi ezisikiwe ezingaphilile kunezinye — zicishe zifane ngenani lokudla okunempilo. Umehluko okuwukuphela kwawo owokuthi izinsimbi ezisikiwe zensimbi ziphakeme kancanyana ku-fiber encibilikayo, engakhuphula ukugcwala; kungehlisa i-cholesterol futhi kulawule ushukela wegazi; futhi kusiza ukulawula ukugaywa, ngakunye UHarvard TH I-Chan School Yezempilo Yomphakathi .
I-Alvarez / Getty Izithombe
Izinzuzo zezempilo zama-oats
Njengoba sishilo, ama-oats angumthombo omuhle we-fiber encibilikayo, okushiya uzizwe wanelisekile ngemuva kokudla kwasekuseni. Futhi ukuthi kusho ukuthi bangasiza ekunciphiseni isisindo futhi basize ukulawula ushukela wegazi namazinga we-cholesterol. Ziyi-carbohydrate eyinkimbinkimbi, ngakho-ke zinzima ukuthi umzimba wakho wehle futhi zinikeze amandla asimeme.
Ngokuba isitshalo-based , ama-oats nawo aneprotheyini ephezulu kakhulu, okuzokugcina ungashayeki (noma ugasele ikhabethe lokudla okulula) ngo-11 ekuseni.
Ukungasho, ama-oats ngobuchwepheshe a okungenayo i-gluten okusanhlamvu. (Vele ufunde amalebula ukuze uqiniseke ukuthi ama-oats owathengayo awacutshungulwanga eceleni kwezinye izithako eziqukethe i-gluten.)
Yini ama-oats asheshayo?
Ama-oats asheshayo, avame ukubizwa ngokuthi ama-oats asheshayo, awuhlobo lwe-oat olucutshungulwa kakhulu — enziwa njenge-oats esongwe kodwa agoqwe aze abe mncane kakhulu ukuze apheke umbani ngokushesha (yingakho igama). Ama-oats asheshayo athatha cishe umzuzu noma emibili ukupheka, kepha agcina cishe akukho ukuthungwa futhi anemisipha eminingi kune-oats yensimbi esikiwe negoqiwe.
Noma kunjalo, ama-oats asheshayo angenalutho — uhlobo olithenga nge-canister — anezinongo zokudla okunempilo njenge-oats yensimbi esikiwe kanye nama-oats asongwe. Bahlawulisiwe ibhulakufesi ukukhetha, uma ungakhathali ngephalishi le-mushy. Lapho izinto ziba mnandi khona lapho uqala ukukhuluma ngakho kufakwe ngaphambilini ama-oats asheshayo, avame ukuqukethe ushukela ongeziwe. (Uxolo, amaqanda e-dino.)
Yiziphi izinhlobo zama-oats okufanele uzidle?
Njengoba izinsimbi ezisikiwe nezinsimbi ezigoqiwe ziqhayisa ngamaphrofayli acishe afane okudla okunempilo (womabili anefayibha ephezulu, anamafutha amancane, inhliziyo iphilile futhi iyagcwalisa), kufanele udle noma yikuphi okufunwa kakhulu ngama-oats. Uma uthanda ukuthamba, i-creamier oatmeal, khetha ama-oats ahlanganisiwe. Uma ukhetha ukuthungwa okuningi okuhlafunayo nokunambitheka kwamantongomane, hamba ngensimbi. Uma nje ukhetha okokufaka okunomsoco ngokulinganayo (njengezithelo ezintsha, iyogathi yamaGrikhi namantongomane), awukwazi ukungahambi kahle.
imovie yothando ehamba phambili ehollywood
Futhi yimaphi ama-oats okungafanele uwadle? Sizama ukugwema amaphakethe e-oatmeal ashukela asheshayo ngokuncamela izinketho ezingacutshungulwa kancane… kepha zisengaphezulu kunosinga, yithi, ikhekhe lasekuseni.
OKUSHIWO: I-Almond Butter vs Peanut Butter: Iyiphi Inketho Enempilo?
kumele ubuke ama-movie othando
zothando hollywood movie 2012
ibhotela lomango lesikhumba
amathiphu wokuwa kwezinwele zokuma
acupressure amaphuzu wokudangala